महिलाले राति ब्रा लगाएर सुत्ने की नलगाई ? यस्तो छ वास्तविकता | Rajmarga
महिलाले राति ब्रा लगाएर सुत्ने की नलगाई ? यस्तो छ वास्तविकता
तर, केहि महिला सौन्दर्य विशेषज्ञहरुले ‘ब्रा’ फुकालेर सुत्नाले स्तनको आकारमा नकरात्मक असरपर्ने र चाँडै स्तन झोल्लिने समस्या देखापर्ने प्रतिक्रियासमेत दिएका छन् । मेडिकल जर्नलकाअनुसार ‘ब्रा’, विशेषगरी भित्री कपडाले रक्तसन्चारलाई प्रभावित गर्दछ । यसले स्तनको आसपासको मांसपेसीलाईसमेत दबाब दिने गर्दछ । जसबाट स्नायुप्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पुग्दछ ।
त्यसमध्ये कसिलो ‘ब्रा’ लगाउनु झन् घातक मानिन्छ । कसिलो ब्रा ले स्तनमा हुने स–साना कोष तथा तन्तुहरुलाई दुःख दिने गर्दछ । त्यसैले चिकित्सकहरुले सुत्नुअघि ब्रा फुकालेर हल्का कपडा लगाउन सल्लाह दिने गर्दछन् । ब्रा लगाएर सुत्नाले ‘ब्रा’मा रहेको हुकले छालामा हानि गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । जसबाट छालामा घाउ तथा संक्रमण हुने सम्भावनासमेत रहन्छ ।अनुसन्धानकर्ताहरुकाअनुसार ब्राले शारीरिकमात्रै नभइ मानसिक तनावसमेत दिने गर्दछ ।
ब्रा लगाएर सुत्नाले जीवाणुको संक्रमणको जोखिम बढ्दछ । छातीको वरिपरि संक्रमणको जोखिम हुने र स्तनमा संक्रमणको लागि ब्राले सहयोगी भूमिका खेल्दछ ।त्यस्तै, यदि तपाइँ रातको समयमा सुत्नुअघि ब्रा नफुकाली लामो समयसम्म लगाइरहनु हुन्छ भने स्तन वरिपरि एक प्रकारको दाग एवं धब्बा बस्ने र छालाको रङ शरीरकोभन्दा फरक देखिने गर्दछ ।
साथै, पसिना आउने समस्या छ भने छालासम्बन्धी रोगहरुकोसमेत जोखिम बढ्दछ । ब्रा नलगाइ सुत्दा स्तनको आकार तल–माथि (स्तन झोल्लिने) हुने समस्या हुन्छ कि भन्ने यदि लाग्छ भने त्यसको लागि दैनिक शारीरिक व्यायाम र चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम प्राकृतिक स्तन थेरापी गर्न सुझाव दिइएको छ ।
Previous post: भुजुङले यसरी लुट्न लगाएका थिए साढे ३३ केजी सुन
Next post: तपाईलाई थाहा छ महिलाहरू के चाहन्छन् ?
किन पुरूषमा भन्दा महिलामा सेक्स चाहना बढि हुन्छ ?
निकै उपयोगी हुन्छ प्याजको बोक्रा, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग
यस्ता रहेछन् यौनक्रिया पीडादायक हुनुका कारणहरु
यौनसम्बन्धी यो सात चलन, शायद तपाईले कहिल्यै सुन्नु भएको छैन